Apo makakatanwa ari mubato reMDC T ave kukonzera mhirizhonga pakati pevamwe vakuru vakuru nevamwe vatsigiri vebato iri vamwe vanhu vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti pasave nekusarurana kuchishandiswa marudzi munyika sezvo izvi zvichigona kuparadza nyika.
Nyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa, VaSamukele Haedebe, vanoti kupatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi rose uye muAfrica.
Vanoti dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana-siyana akabataindzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana-siyana dzakavepo mushure mekuwana kuzvitonga.
VaHadebe vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadai saana mushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri ndosaka vaiedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDC T uko kunonzi nevamwe kwave kutora ruvara rwemarudzi, VaHadebe avo vanoti vakashanda namushakabvu VaMorgan Tsvangirai pamwe naMuzvare Thokozani nevamwe vakuru vakuru vebato iri, vanoti vanorwadziwa zvikuru kuwona kurwisana uku.
Vanoti sekuziva kwavo, mushakabvu pamwe naMuzvare Khupe vanhu vasaita zvekusarura vanhu vachishandisa rudzi.
VaHadebe vanoti kune vanhu vakawanda vanogona kuda kushandisa nyaya yemarudzi kuti vawane rutsigiro mune zvematongerwo enyika asi vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vave vanobuda pachena vachishora nyaya iyi nekuti inogona kuparadza nyika.
VaHadebe vanoti VaNkomo naVaTsvangirai vanhu vakapa mucherechedzo wekuti vatungamiri vanogona kuwana rutsigiro kubva kune veruzhinji zvisinei nerudzi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kukoshesa mucherechedzo wakadaro.
Mutauriri webato reZAPU, VaIpithule Maphosa, vanoti semaonero avo, mhodzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusunguko vakabuda mubato reZAPU vachinovamba bato reZANU mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yehutongi hwevamboive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
VaMaphosa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro vachitiwo vanhu, kunyanya vatungamiri mune zvematongerwo enyika, vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai.
Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona kwete kuti ndeve rudzi rupi.
VaMaphosa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika pakurayana kwakaita vanhu muRwanda mugore ra1994 pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechiHutu neverudzi rwechiTutsi kwakaurayisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu.
VaTyanai Masiya avo vanodzidzisa public administration paUniversity of Pretoria muSouth Africa, vanoti vanoona kupokana kuri kuitika iko zvino mubato reMDC T kune chekuita nenyaya yemarudzi.
Vanoti hazvishamise kuti mune zvematongerwo enyika vamwe vanhu vashandise nyaya yemarudzi asi vanoti iyi haizi tsika yakanaka.
VaMasiya vanoti vanhu vanogona kudzidza zvakawanda kubva kunhoroondo yaVaBarak Obama avo vakambove mutungamiri weAmerica zvisinei kuti ndeve rudzi rwechitema urwo rwunove nevanhu vasina kunyanya kuwanda munyika iyi zvichienzaniswa nemamwe marudzi.
MuMDC T muri kuita makakatanwa ekuti ndiyani wotungamira bato iri mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai uye makakatanwa aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri VaNelson Chamisa neVaMuzvare Khupe.
VaChamisa vanoti ndivo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi Muzvare Khupe vanoti zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo uye ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato sezvo vari ivo vakasarudzwa semutevedzeri waVaTsvangirai pakongiresi yakaitwa mugore ra2014.